Maamulka Gobolka Hiiraan: Diyaar ayaan u naahay ka qeyb galka Shirka Maamul u sameynta labada Gobol – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 11 January 2016 11 January 2016
Baladweyne (Mareeg) — Guddoomiye ku xigeenka dhinaca arimaha Bulshada ee Maamulka Gobolka Hiiraan, Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo la hadlay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Hiiraan uu diyaar u yahay ka qeyb galka Shirka Maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe.
Sheekh Xuseen Cismaan Cali Guddoomiye ku xigeenka dhinaca arimaha Bulshada ee Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa tilmaamay in ergada kaga qeyb galeysa ay ka ambabixi doonaan dhawaan Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Sheekh Xuseen ayaa meesha ka saaray in ay jiraan warar sheegaya in Odayaasha Dhaqanka ee Hiiraan ay diidan yihiin ka qeyb galka Shirka lagu wado in lagu qabto Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Sh.Dhexe, isagoo tilmaamay in la isku raacay qeyb galka Shirkaasi.
Waxuu xusay in kulamo lagu taageerayay Shirka Maamul u sameynta labada Gobol ay ka soconayeen Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan.
Maalmihii u dambeeyay Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe waxaa laga dareemayay u diyaar garowga Shirka labadaasi Gobol iyadoona lagu wado in Shirkaasi uu dhawaan ka furmo Magaalada Jowhar.